🥇 Akaụntụ maka ndị na-edekọ logistist
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 112
Vidiyo nke ịza ajụjụ maka ndị logisticians
Nye iwu ka edebanye aha ndị logist
USU-Soft logisticians ’usoro njikwa akaụntụ bụ ọrụ iji hụ na njem nke ngwaahịa nke ngwaahịa dị iche iche. Emere ngwa a dịka ụkpụrụ niile dị mkpa, nke ga-emerịrị ịdị adị nke ụdị ọrụ a. Ihe dị ugbu a nke ikpo okwu na-enye ohere ịbawanye ụba nke ntụgharị. Ngwongwo ihe njikwa ibu maka ndi oru logist nwere ike inyere ndi oru aka inye nlekọta zuru oke nke uzo. Usoro ahụ na-esetịpụ ogo ojiji nke ụgbọ ala, yana ịchọta usoro kachasị mkpa. A na - emepụta ụdị nnwale nnwere onwe nke ngwa logisticians nke njikwa ego iji mee ka ị mụta otu esi arụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ eletriki na akwụkwọ ndekọ aha. N'oge anyị, ọ dị ezigbo mkpa ịchọta ezigbo ihe ọmụma gbasara ozi (dịka usoro ndekọ ego nke logisticians maka njem nke ngwongwo). Ngwa oru na-abanye n'ime usoro mmepe ya kachasị ọhụrụ site na nhazi usoro nkọwa teknụzụ. Ndị okike na-agbasi mbọ ike iwebata mmelite, na nke a, ọrụ inyeaka na-apụta mgbe ị na-arụ ọrụ ụlọ nke ndị ọkachamara.
Ezigbo ngwa njikwa njem nke ndị na-edekọ logisticians dị ezigbo mkpa na ọrụ ndị ọrụ logisticians. Mmepe nke iwu, dabere na njirimara dị iche iche nke ngwaahịa ndị a, ga - emerịrị ngwa ngwa na sọftụwia ndị logisticians nke njiri mara mma. Ọtụtụ ndị na-emepụta usoro ihe omume maka ndị na-edekọ ihe na-enye obere ndepụta ọrụ (dịka ọrụ nke ibu ibu nke ngwongwo 1C). Usoro mmemme USU-Soft maka ndị na-edekọ logist nwere ndepụta nke ohere maka ebumnuche nke ngalaba akụ na ụba ọ bụla. A na-ewere usoro mmemme maka ndị na-edekọ logist ka otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ebumnuche ụlọ. Sọftụwia ahụ na-enyocha ntinye data oge niile na usoro oge. Ná ngwụsị nke ọkwa ọ bụla, ọ na-enye ozi gbakọtara nke nwere mmetụta dị ukwuu na mmepe ụlọ ọrụ ahụ.
Na ngwa agha, usoro teknụzụ ahọpụtara n'ụzọ ziri ezi na-eme ka o kwe omume iji melite ọrụ nke ndị ọrụ, yabụ ha kwesịrị ileba anya n'ụgbọ ala ahụ dum n'usoro ọrụ. Na ụlọ ọrụ lọjistik, a ịrịba òkè nke isi ego na-agbaziri site ugbo ala, ya mere, nke a bụ nke otu ihe dị mkpa. Anyị na-emegharị lọjistik usoro nwere ike ibudata n'ihi na free dị ka a ngosi version. N'otu oge ahụ, o zuru ezu ịkpọtụrụ ndị mmemme anyị ma ị ga-enweta njikọ ọrụ nke na-adịghị ize ndụ ibudata nnwale n'efu. Usoro njirisi njirisi logistics maka ndị na-ebu ibu nwere ike inye aka jikọta iwu ma mepụta usoro nchekwa achọrọ na azụmaahịa njem. N'ebe ọ bụla nke onyinye nke ọrụ, achọrọ akwụkwọ ụfọdụ maka ebumnuche njikwa, ma ọ bụ n'ihi ụzọ gasị, na mpaghara adreesị nke ọrụ na ụzọ nke ụlọ ọrụ logistics, ma ọ bụ n'ihi oke ya. Usoro nhazi ihe eji eme ihe maka ndi oru logist na enye gi ohere i nyefee otutu ibu oru nke ndi oru ya na ime ka ahia di ire. N'ihi nkwado nke teknụzụ kachasị ọhụrụ na lọjistik, a na-enweta njikarịcha onwe nke ọtụtụ ụgwọ. Nwere ike ibudata nnwale n'efu nke ngwanrọ na ibe a.
Usoro mmemme nke logisticians nke njikwa na njikarịcha nke ibu ibu site na adreesị na ụzọ gasị amalite na ngụkọta oge nke ibu ibu njem na mmepe nke a nkịtị nchekwa data nke ndị ọrụ ngo. Mmemme logistics nke njikwa na njikarịcha nke njem ụgbọ nwere ọtụtụ atụmatụ nke ndị mmekọ ’na ndị ahịa’ imekọ ihe ọnụ. Nlekọta anya n'ọhịa na echiche nke njikarịcha nke njem na-eduga na nhazi nke arịrịọ kwekọrọ na geolocation na ọnọdụ. Iji chịkwaa nnyefe ozi, usoro ijikwa ọrụ nnyefe na-eburu n'uche iwu na-enweghị njedebe. Usoro mmemme logisticians na-enyere aka ịbawanye ewu ewu nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọrụ telephony na izipu ozi site na e-mail ga-enweta gị n'efu. Njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ achọghị ụzọ ọ bụla itinye ego iji nyere aka. Ọrụ ego nke ụlọ ọrụ lọjistik ga-abụ nke dabere na mkpali na mkpali e lekwasịrị anya nke ọma.
Mmemme ego nke ndị logistists ga-enye ohere itinye ego nke ọma na steeti steeti nso nso. Ngwa ahụ nwere ọtụtụ isiokwu iji hazie interface. Usoro ụzọ ụgbọ ala na-enye gị ohere ịhazi nhazi windo maka onye ọrụ ọ bụla. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ijikọ ngwongwo site na njedebe. Akpaaka na-akpaghị aka bụ ụzọ dị mma iji zọpụta ndị ọrụ site n'ịrụ ọrụ oge niile ma nweta ozi ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya na ọnọdụ ụlọ ọrụ. Akụrụngwa nwere ike ịmepụta akụkọ n'ụdị eserese, eserese ma ọ bụ tebụl - na nhọrọ gị. Akụrụngwa ahụ na-achịkwa ikike ọ bụla anabatara maka ọrụ. Ndị ọrụ ahụ agaghị agbagha usoro, ọnọdụ ma ọ bụ usoro ọ bụla. Maka njikwa, ọ dị mkpa iburu n'uche omume nke ndị ọrụ. Akpaghị aka ajụjụ ga-egosi na ezigbo arụmọrụ nke ọ bụla na-arụ. Usoro a na-agbakọ ụgwọ ọnwa ma gosipụta ndị kwesịrị inweta. Ibu akwụkwọ na-ebu ibu siri ike; ekwesighi mmejọ na ya. Usoro nke ijuputa n'ụdị, omume, akwụkwọ ọnụahịa ga-enyere aka ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi inye akwụkwọ maka azụmahịa ọ bụla.